Izitshixo ezi-6 zempumelelo yeNkonzo yaBathengi usebenzisa iiMidiya zoLuntu | Martech Zone
Izitshixo ezi-6 zempumelelo yeNkonzo yaBathengi zisebenzisa iMidiya yokuNxibelelana
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 1, 2017 Douglas Karr
Sabelana Iinkcukacha-manani malunga nokukhula kwenkonzo yabathengi kusetyenziswa imidiya yoluntu, kwaye le infographic iyithatha kancinci, inikezela ngamaqhosha ama-6 ahlukileyo kwinkampani yakho ukuze ayibandakanye ukuqinisekisa impumelelo. Ukunyamekela inkonzo yabathengi kunokuphazamisa ukuthengisa kwakho, ngoko ke kubalulekile ukuba abathengisi bajonge imvakalelo kunye nexesha lokuphendula ngokusebenzisa imidiya yoluntu.
Kuphononongo olunye lwe-JD Power lwabathengi abangaphezulu kwama-23,000 abakwi-Intanethi, ngama-67% abaphenduliweyo baxela ukuba banxibelelana nenkampani ngeendaba zosasazo zasekuhlaleni ukuxhasa. Nangona kunjalo, ukubakho kwimidiya yoluntu kuphela akwanele. Ukuyisebenzisa ngokukuko, ishishini kufuneka libe nenkathalo kwindlela abamamela ngayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba baphendula njani. Ukwabiwa kwehlabathi
Nazi izitshixo ezi-6, ngokwe-infographic Iingcebiso eziPhezulu zokuSebenzisa iMidiya yoLuntu kwiNkonzo yaBathengi, Ukusuka kugqatso lwehlabathi:
Khetha okona kulungileyo Iqonga leMidiya yoLuntu elungele iimfuno zakho zeshishini-singunozakuzaku I-Agorapulse endinokuyincoma kuwo nawuphi na umbutho omkhulu nomncinci. Iqonga libonisa ukusebenzisana kwakho njengebhokisi lemiyalezo engenayo, elenza ukuba iinkampani ziphendule okanye zidlulisele imicimbi ngokufanelekileyo.
Ukubeka iliso kwiiNtetho zeNtlalo -Abathengi kunye nethemba baya kukukhankanya kwimidiya yoluntu ngaphandle kokukuphawula okanye ukuthetha nawe ngqo. Kubalulekile ukuba usebenzise iqonga apho unokulumkiswa khona xa ukhankanywa ukuba uqhubeke nemicimbi yenkonzo yabathengi. Olu lolunye uphawu olukhulu lwe I-Agorapulse, kwaye ke.
Sebenzisa Ithoni yasekunene yelizwi ngokufanayo Iimpendulo ze-sassy azihlali ziguqulelwa kakuhle kwi-intanethi, ke qiniseka ukuba ulungelelanisa impendulo yakho kunye nesicelo esenziweyo. Iqela lakho kufuneka likhathalele… kwaye livakale ngathi bayakhathala… ukuze ungazukuphicothwa okanye ugxekwe kuthungelwano lomntu ngamnye.
Khumbula Izinto ezenziwa kunye nezingamele zenziwe kumajelo asekuhlaleni -Ukungakhathaleli, ucime okanye ufihle izimvo, zikhusele, uzibandakanye neetroll, okanye uxinzelele abathengi bakho ngolwazi oluninzi. Yibulele ngokuzisa ingxaki kuwe, yamkele inkxalabo yabo, kwaye uxolise ngengxaki leyo. Uninzi lwazo zonke, qinisekisa ukuba ungafikelela kwisisombululo esenza ukuba umthengi onwabe.
Sebenzisa i Okubelelwe elwazini -I-91% yabathengi abakwi-Intanethi bathi bazakusebenzisa isiseko se-onling knowldge ukuba besikhona kwaye silungiselelwe iimfuno zabo Isiseko soLwazi sinokunciphisa amatikiti enkxaso, sihambise iziphumo ngokukhawuleza, kwaye sigcine abathengi bonwabile.
Yazi ukuba uza kuwuthatha nini umcimbi ngaphandle kweintanethi -Iqonga loluntu elinjengeendaba zosasazo zasekuhlaleni alinakuba yeyona ndawo ilungileyo kubathengi abanomsindo kunye neengxaki ezinzima Akuqhelekanga ukubuza umthengi ukuba akulandele, qhagamshela kunye nabo ngomyalezo othe ngqo, kwaye uhambise incoko ngaphandle kweintanethi ngefowuni okanye ubuso ngobuso apho ungabanceda ngokufanelekileyo.
tags: Inkonzo eyenzelweInkonzo yabathengi infographicImpumelelo yenkonzo yabathengiukukhutshwa kwehlabathikwi-infographicImidiya yokuncokolakwimidiya yoluntu
Ixesha elizayo leziVumelwano eziZisebenzelayo zisebenzisa iBlockchain